Shuruudaha Adeegga - PDF.to
Hoos waxaa ku qoran tarjumaad adag oo ku saabsan shuruudaha ingiriisiga ah ee adeegga iyo siyaasadda gaarka ah ee qaaska ah ee qaanuunada sharciga ah labadaba waxay ku adeegsanayaan Ingiriisi kaliya
Asturnaantaada annaga ayaa muhiim noo ah. Waa siyaasada Pdf.to inay xurmeyso arimahaaga gaarka ah wixii macluumaad ah ee aan kaa aruurin karno bartayada internetka, https://pdf.to , iyo goobo kale oo aan iska leennahay oo aan ka shaqeyno.
Waxaan weydiisan karnaa macluumaadka shaqsiyeed markii aan run ahaan ugu baahan nahay inaan adiga ku siino adeeg. Waxaan u ururinaa qaab cadaalad ah oo sharci ah, adiga oo wata aqoontaada iyo ogolaanshahaaga. Waxaan sidoo kale kugu soo ogeysiinay sababta aan u soo uruurineyno iyo sida loo adeegsan doono.
Waxaan hayn karnaa macluumaadka la ururiyey ilaa iyo inta lagama maarmaanka ah si aan kuugu siino adeegga aad codsatay. Macluumaadka aan keydinayno, waxaan ku ilaalin doonnaa qaab ganacsi ahaan la aqbali karo si looga hortago khasaaro iyo xatooyo, iyo sidoo kale marin u helid aan la fasaxin, shaac ka qaadis, koobiyeyn, isticmaal ama wax ka beddelid.
Uma wadaagi karno wax shaqsi ah oo tilmaamaya macluumaadka guud ama cid saddexaad, marka laga reebo marka sharcigu farayo.
Websaydhkeenna waxaa laga yaabaa inuu ku xiro boggag dibadeed oo aan annagu maamuli karin. Fadlan la soco in aanaan xakameynin waxa ku jira iyo dhaqamada bogaggan, mana aqbali karno mas'uuliyadda ama mas'uuliyadda siyaasadaha gaarka ah ee ay leeyihiin.
Waxaad xor u tahay inaad diido codsigeenna macluumaadkaaga shakhsiyeed, iyadoo fahamka laga yaabo inaanaan ku siin karin qaar ka mid ah adeegyada aad rabto.
Isticmaalkaaga joogtada ah ee websaydhkaaga waxaa loo qaddarin doonaa inuu aqbalayo dhaqamadeena ku saabsan asturnaanta iyo macluumaadka shaqsiyeed. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aan u maareeyno macluumaadka isticmaalaha iyo macluumaadka shaqsiyeed, xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Nidaamkani wuxuu dhaqan galaa ilaa 6 Juun 2019.
Faylasha la soo diray ayaa la tirtirayaa laba saacadood kadib laba faylal oo la beddelayna waa la tirtirayaa 24 saacadood ka dib. Si loo xakameeyo xadgudubka, waxaan galnaa cinwaanka IP-ga ee sameeyay beddelaad markii fayl la beddelo, ma jiro wax xiriir ah oo ku saabsan faylasha iyo cinwaanka IP. Hal saac kadib cinwaanka IP-ga waa la tirtirayaa sidaa darteed waa u xor in la sameeyo beddelaad kale.
PDF ilaa PNG
PDF illaa DOC
PDF ilaa PPT
PDF ilaa PowerPoint
PDF illaa Sawirka
PDF ilaa XLS
PDF ilaa XLSX
PDF ilaa PPTX
PDF ilaa OCR
PDF ilaa TIFF
PDF illaa Email
PDF ilaa ZIP
DOC ilaa PDF
DOCX ilaa PDF
XLS ilaa PDF
XLSX illaa PDF
PowerPoint ilaa PDF
PPTX illaa PDF
TIFF ilaa PDF
Sawirka loo geynayo PDF
Tirtir bogagga PDF
Isku darka PDF
195,645 isbeddelada tan iyo 2019!
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Shuruudaha Adeegga - Nala soo xiriir - API
Waxaa sameeyey nadermx - © 2020 Pdf.to
Waxaad dhaaftay xadkaaga beddelka saacaddiiba, waad badali kartaa faylashaada gudaha 59:00 ama Saxiix oo beddelo hadda.
Waxaa la dallacayaa hal mar
La cusbooneysiiyay haddii aan la burin mooyee